Zano: Maitiro Ekutsvaga Akafanana Vector Mifananidzo Mune Yako Stock Photo Saiti Ine Google Image Kutsvaga | Martech Zone
Masangano anowanzoshandisa vector mafaera ayo ane marezinesi uye anowanikwa kuburikidza nemastock mapikicha. Dambudziko racho rinouya pavanenge vachida kugadzirisa zvimwe zvibatiso mukati mesangano kuti vaenzanise makwikwi uye marangi anoenderana neakamboburitswa iconography kana zviratidzo.
Dzimwe nguva, izvi zvinogona kuve nekuda kwekudzoka zvakare… dzimwe nguva vagadziri vatsva kana zviwanikwa zvesangano zvinotora zvirimo uye dhizaini dhizaini nesangano. Izvi zvichangobva kuitika nesu patakatora nzvimbo tichishandira kambani uye tichivabatsira mukugadzira zvirimo.
Shandisa Google Image Kutsvaga Kuti Uwane Akafanana Vectors muStock Photo Site
Icho hunyengeri hwandinoda kugovana nemunhu wese kushandisa Google Image kutsvaga. Kutsvaga kwemifananidzo paGoogle kunoita kuti ukwanise kuisa chifananidzo uye kupindura nemifananidzo yakafanana pawebhu. Imwe nzira pfupi, zvakadaro, ndeyekuti iwe unogona kunyatso tsvaga saiti chaiyo… senge stock photo site.
Ndanga ndiri mubatanidzwa uye wenguva refu mutengi we Depositphotos. Ivo vane yakasarudzika sarudzo yemifananidzo, vector mafaera (EPS), uye mavhidhiyo pane yavo saiti neimwe yakasarudzika mitengo uye marezenisi. Aya ndiwo mashandisiro andinoita Google Image Kutsvaga kuti ndiwane mamwe maveki pane yavo saiti inoenderana zvakafanana dhizaini.
Semuenzaniso uri pamusoro, ini ndoda kutumira yangu vector mufananidzo kune iyo png kana jpg fomati yekuisa paGoogle Image Kutsvaga:
Maitiro Ekutsvaga A Stock Photo Saiti Yakafanana Vectors
Nhanho yekutanga ndeye kushandisa Google Image Tsvaga. Iyi yekubatanidza yeiyi iri mukona yepamusoro yekurudyi peji reGoogle peji.
Google Image Kutsvaga inopa iyo Upload icon paunogona kurodha muyenzaniso mufananidzo waunoda kutsvaga.
Google Image Tsvaga inopa icon yekukanda uko iwe kwaunogona kurodha iwo muenzaniso mufananidzo waunoda kutsvaga. Iko zvakare kune sarudzo yekuisa URL yemufananidzo kana iwe uchiziva panogara mufananidzo wacho pane yako saiti.
Iye zvino Peji Yekutsvaga Mifananidzo yeGoogle ichapa mufananidzo. Inogona zvakare kusanganisira metadata mazwi akaiswa mukati memufananidzo faira.
Apa ndipo pane hunyengeri ... iwe unogona kuwedzera a yekutsvaga paramende kungo tsvaga mukati meimwe webhusaiti uchishandisa syntax inotevera:
Nesarudzo, iwe unogona zvakare kuwedzera mamwe mazwi kana uchida, asi ini handiwanzo kana ndichitsvaga mavekitori kuti ndikwanise kuwana maraibhurari akazara emavheji akafanana kurodha pasi nekushandisa.
The Peji Yekutsvaga Mifananidzo yeGoogle inouya nesarudzo yemhedzisiro yakafanana nemufananidzo wepakutanga. Iwe unogona kazhinji kuwana iyo yekutanga vector mukati memhedzisiro futi!
Iye zvino ndinogona kungotarisa Depositphotos kubva pamhedzisiro iyi, tsvaga iyo mifananidzo kana maraibhurari akafanana, uye uashandise iwo ekuwedzera magadzirirwo atiri kugadzira kune mutengi!
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu yakabatana link ye Depositphotos munyaya ino.
Tags: brandingwobvaEPSgoogle chifananidzo chekutsvagagoogle yekutsvaga paramendeillustratornzvimbo yekutsvaganzvimbo yekutsvagamufananidzo wemasokisimasheya vekivector mafaera